Uwazi kanjani ukhiye we-Windows 10 | Izindaba zeWindows
Ungazi kanjani iphasiwedi ye-Windows 10
U-Ignacio Sala | 29/04/2022 12:00 | Imihlahlandlela namathiphu, Windows 10
Kulesi sihloko sikubonisa ukuthi wazi kanjani Windows 10 ukhiye, ukhiye odingekayo ukuze ukwazi ukuwuvula Windows 10 futhi ujabulele izibuyekezo nezinketho zokumisa ezisinika zona.
Endabeni ye-Windows 10 ukhiye, ikhodi yezinombolo eyenziwe ngamabhulokhi angu-5 anezinombolo ezi-5 nezinhlamvu. Le khodi kufanele ifakwe phakathi nenqubo yokufaka Windows 10.
Ungakwazi futhi ukuyifaka uma inqubo yokufaka isiqedile. Uma ungenawo ukhiye ovumelekile, umbhalo othi Windows awucushiwe uzovezwa ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini.
Ngaphezu kwalokho, idivayisi ngeke ithole izibuyekezo futhi ngeke isivumele ukuthi sifinyelele izinketho zokucushwa kwedivayisi. Woza, ngaphandle kokhiye ovumelekile akusizi noma akusizi ngalutho ukukufaka Windows 10 noma Windows 11.
1 Uphi ukhiye we-Windows 10
1.1 isitika selayisense
1.3 Embhalweni wekhompyutha
2 Ukhiye womkhiqizo uma uqhathaniswa nelayisense yedijithali
3 Ungazi kanjani iphasiwedi ye-Windows 10
3.1 Ukubhaliswa kweWindows
4 Ukhiye womkhiqizo usebenza kuphela ngenguqulo ethile ye-Windows
Uphi ukhiye we-Windows 10
Kuya ngokuthi uyithenge kanjani ikhompuyutha yakho noma i-Windows, ukhiye wokubhalisa ungatholakala ezindaweni ezahlukene.
Uma sithenge ikhompuyutha eza nayo Windows 10 efakiwe, inombolo yelayisense itholakala ngezansi uma kuyilaptop, isitika, ngeshwa, esisulwa kalula.
Kodwa uma kuyideskithophu othenge ngayo Windows 10, ilebula yenombolo yelayisensi izoba seceleni.
Uma uthenge ikhompuyutha nge-Windows 7 noma i-Windows 8, ilebula yenombolo yelayisensi izophinde ibe ngezansi uma kuyikhompyutha ephathwayo noma ohlangothini olulodwa uma kuyideskithophu.
Ngoba iMicrosoft ikwenze kwaba mahhala ngokuphelele ukuthi ithuthuke kusuka Windows 7 kanye ne-8 kuya Windows 10, ukhiye we-Windows osetshenziswe kulawo ma-PC uguqulelwe kwilayisensi yedijithali nge Windows 10 thuthukisa.
Uma uthenge ilayisensi kumthengisi ogunyaziwe, uzothola inombolo yelayisense kubufakazi bokuthenga obuthunyelwe kuwe nge-imeyili.
Uma uthenga ikhompuyutha ukuze uyihlanganisele izingxenye, uma nawe uthenge ilayisensi ye-Windows 10 ngaleso sikhathi, inombolo yelayisensi izotholakala eduze kwamabhokisi ezingxenye, inqobo nje uma ungawalahli.
Ukhiye womkhiqizo uma uqhathaniswa nelayisense yedijithali
Ngokukhululwa kwe Windows 10, iMicrosoft yashintsha igama lokhiye womkhiqizo laba ilayisensi yedijithali.
Umehluko phakathi kokhiye womkhiqizo kanye nelayisense yedijithali ukuthi lena yakamuva ihlotshaniswa nehadiwe ethile futhi ihlotshaniswa ne-akhawunti ye-Microsoft.
Ngokuhlotshaniswa nehardware ethile, yona ehlotshaniswa ne-akhawunti, ngaso sonke isikhathi uma ufaka kabusha ikhompuyutha yakho, ngeke udinge ukuthi uphinde ufake inombolo yelayisense, njengoba iWindows izobona i-hardware yekhompuyutha futhi ivule ilayisense ehambisanayo.
Nokho, ukhiye womkhiqizo owasetshenziswa kuze kube i-Windows 8 yabelwa phakathi kwamadivayisi ahlukene, ngaphandle kokuhlotshaniswa nehadiwe ethile. Lokhu kuvumele ilayisense eyodwa ukusebenzisa iWindows enelayisensi esemthethweni nesemthethweni.
Uma, ngeshwa, singawutholi ukhiye we-Windows, noma emibhalweni yethimba lethu noma ebhokisini leposi, konke akulahleka.
Ngenhlanhla, sisengakwazi ukubuyisela ukhiye wemishini yethu kusistimu yokusebenza ngokwayo.
IWindows ayisivumeli ukuthi sazi ngendlela elula ilayisense yekhophi yethu yeWindows. Eqinisweni, sizophoqeleka ukuthi siphendukele kuzinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle ukuze sikwazi ukukukhipha kusistimu yethu.
Uma ungafuni ukufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukuze wazi Windows 10 ukhiye, ungawazi ngokubhalisa kweWindows.
Into yokuqala okufanele ucace ngayo ngaphambi kokungena ebhukwini ukuthi uma ulungisa noma yiliphi inani, okokusebenza kungase kuyeke ukusebenza noma kuqale ukwenza kanjalo ngendlela engaqondakali.
Ngokulandela lezi zinyathelo engikubonisa zona ngezansi, awudingi ukushintsha lutho, ngakho-ke uma ulandela imiyalo enginingilizayo, uzokwazi ukhiye weWindows ngaphandle kokwenza izinguquko kurejista.
Okokuqala, sivula ukubhaliswa kwe-Windows ngokuthayipha igama elithi regedit ebhokisini lokusesha le-Windows bese uchofoza umphumela kuphela oboniswayo: I-Windows Registry.
Okulandelayo, siya kuhla lwemibhalo elandelayo.
Ngaphakathi kwesikhombi I-SoftwareProtectionPlatform, sibheka ifayela elithi BackupProductKeyDefault. Ngakwesokudla (kukholomu Yedatha), inombolo yelayisensi ye-Windows 10 izovezwa.
Esinye sezinhlelo zokusebenza ezahlukene esinazo yazi inombolo yelayisensi yekhophi yethu ye-Windows, isebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-ProduKey.
I-ProduKey uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala futhi singalanda ngalokhu okulandelayo isixhumanisi. Uhlelo lokusebenza alunamfihlakalo, kufanele sisilande futhi siluqhube.
Okulandelayo, izosibonisa igama lomkhiqizo, kuleli cala Windows 10 Ikhaya, lilandelwa isihlonzi sohlobo lomkhiqizo we-Windows kanye nokhiye welayisensi, njengoba sibona esithombeni esingenhla.
Olunye uhlelo lokusebenza oluthokozisayo esinalo lokuthola igama-mfihlo lenguqulo ye-Windows esiyifakile kukhompyutha yethu i-KeyFinder.
I-Keyfinder iyisicelo samahhala esingalanda ngalesi sixhumanisi. Isebenza kusuka ku-Windows XP kuya phezulu kuya ku-Windows 11.
Lolu hlelo lokusebenza lisivumela ukuthi sazi ukhiye wokubhalisa kusuka ku-Windows registry noma ku-BIOS ngokwayo. Uma ikhompuyutha yakho indala, ngeke uwuthole ukhiye ku-BIOS, ngakho-ke kufanele sikhethe inketho ethi Funda ku-Registry.
Ukhiye womkhiqizo usebenza kuphela ngenguqulo ethile ye-Windows
Into eyodwa okufanele siyikhumbule lapho sisebenzisa ukhiye wethu we-Windows ukuthi ilayisense ngayinye ivumeleke uhlobo olulodwa lwenguqulo Windows 10.
Ngamanye amazwi, uma ilayisense yekhompyutha yakho ingeye-Windows 10 Ikhaya, ungayisebenzisa futhi ukuze uvule ikhophi ye-Windows 10 Ikhaya. Akuvumelekile ukuthi kusebenze i-Windows 10 Pro nanoma iyiphi enye inguqulo ye-Windows.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » General » Imihlahlandlela namathiphu » Ungazi kanjani iphasiwedi ye-Windows 10
Ungayifaka kanjani kabusha Windows 10 ngaphandle kokulahlekelwa ilayisense
Yini i-Windows Update
Thola izindaba ze-Windows zakamuva ku-imeyili yakho